Kalaabashadii Musharaxa Mucaaradka Kenya ee Tartanka Madaxtinimo oo Dhalisay Cabsi Horle | shiniilenews.com
Thursday, October 12th, 2017 | Posted by Shiniile
Kalaabashadii Musharaxa Mucaaradka Kenya ee Tartanka Madaxtinimo oo Dhalisay Cabsi Horle
Dalka Kenya waxaa ka taagan dood ku saabsan in la qabanayo doorashada 26-ka bishan loo ballansanaa ama in dib loo dhigayo.
Sida ka muuqata qareennada labada dhinac, waxaa jiro jahwareer ka dhashay go’aankii uu qaatay hoggaamiyaha mucaaradka, Raila Odinga, ee uu uga baxay tartanka doorashada.
Dadka qaar waxay doonayaan in doorashada la qabto, kuwana waxay rabaan in dib loo dhigo. Labada dhinacba dastuurka ayey cuskanayaan.
Hadaba maxaa dhici kara ama xiga go’aanka Raila?
“In guddiga uu doorashada qabto”
Guddiga doorashada ee Kenya ayaan weli ka hadlin go’aanka Raila. Balse, kullan ay yeesheen madaxda IEBC ayaa looga hadlay tallaabada xigta ee ay qaadayaan.
Balse waxaa dhici karta in doorashada ay qabtaan 26-ka bishan, ayna shaaciyaan in Uhuru uu ku guuleystay doorashada asigoo aanan lala tartamin, siduu sheegay Dr Cabdiwahab Sheekh Cabdisamad oo siyaasadda ka faallooda.
“Waxaa dhici karta in ay dhahaan madaxweyne Uhuru Kenyatta la lama tartamin, asigana u xaqiijiyaan xilka, ama doorosho in ay qabtaan oo ay dhahaan cid kale maysan taagneyn, asigana siiyaan guusha,” ayuu yiri Dr Cabdiwahaab.
Laakiin waxaa jiro caqabado ka hor imaan kara arrintaa oo ah dhanka dastuurka ama in ay sababto dibadbaxyo xun.
Dr Cabdiwahaab ayaa sheegay: “Taa dhibaato ayey leedahay oo haddii dadka hal deegaan oo ka mid ah kenya, ay diidaan in ay codeeyaan, taas micneheedu wuxuu yahay in doorasho aysan dhici karin.”
Hoggaamiyaha Mucaaradka, Raila Odinga, dalabkiisa waxaa ka mid ahaa in la qabto “doorasho la mid ah tan ay amartay maxkamadda”, iyo in xubno ka mid ah guddiga laga ceyriyo shaqada.
Waxay ku eedeynayaan in ay sabab u ahaayeen qaladaadkii ka dhacay doorashadii August ee sababay in maxkamadda ay laasho natiijadii uu Uhuru Kenyatta ku guulaystay.
“Waxaan gudbinay diiwaan ay ku qoran yihiin dalabaad aan ka noqosho lahayn, lagana gorgortami karin, oo ah in la raaco isbedel lagu xaqiijinayo doorashada,” ayuu yiri Odinga, hoggaamiyaha mucaaradka Kenya.
Laakiin, maxkamadda sare ee Kenya ayaa maanta amartay in dhammaan murashaxiintii horay ugu qaybqaatay doorashadii madaxweynaha ee 8 August, ay hadda u istaagi karaan doorashada ku celiska ah ee bishan dhammaadkeeda loo ballansan yahay.
Ekuru Aukot oo ahaa musharrixii kaalinta seddaxaad galay ayaa u dacwooday maxkamadda ka dib markii loo diiday in uu ka qeybgalo tartanka midda ku celiska ah.
“IEBC iyo Jubilee in ay aadaan maxkamad”
Waxaa dhici karto in guddiga doorashada uu aado maxkamadda ugu sareysa Kenya, uuna waydiisto in doorashada ay u dhacdo sidii la qorsheeyay, sida uu sheegayoDr Cabdiwahaab.
“IEBC iyo Jubilee, midda labaad ee u furun waxay tahay in ay maxkamadda sare aadaan oo ay weydiistaan wixii la sameyn lahaa,” ayuu yiri Dr Cabdiwahaab oo siyaasadda ka faallooda.
“Maxkamadda waxay dhihi kartaa doorasho cusub ayaa la galayaa oo aniga iyo adigaba u tartami karno, ama Uhuru ayey u xukumayaan madaxtinimada dalka. Balse aniga ma hubo waxa uu noqon karo go’aanka maxkamadda,” ayuu hadalkiisa ku daray.
Is beheysiga mucaaradka Kenya ee NASA ayaa ku doodaya in “guddiga doorashada iyo xisbiga talada haya ee Jubilee ay isku mid yihiin”.
Taa ayaa ku beertay walaac ay qabaan oo ah in doorashada soo socota lagu shuban doono, “kana xumaan doonto kuwii hore”.
“Waxaan aragnay in guddiga IEBC ay ka go’an tahay in uusan isbedel ku sameyn xubnaha ka tirsan si looga fogaado qaladaadka iyo isdaba marinta sababay in doorashada lagu celiyo.”
“Dhismaha dowlad ku meel gaar ah”
Dr Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad ayaa sheegay in ay dhici karto in la dhiso dowlad ku meel gaar ah oo lix bilood dalka maamusho ka dibna doorasho kale la qabto, haddii ay dhammaato 60-kii maalmood ee maxkamaddu amartay.
Maxkamadda ugu sareysa ee Kenya ayaa amar ku bixisay in laba bilood gudahood lagu qabto doorasho ku celis ah ka dib markii ay laashay guushii Uhuru Kenyatta uu ka gaaray doorashadii horraantii August.
“Waxaa dhici karta in madaxweynaha iminka talada haya loo xaqiijiyo in uu lix biood ku darsado, ka dibna doorasho cusub la qabto,” ayuu yiri Dr Cabdiwahaab.
Raila Odinga ayaa sheegay in uu doonayo in Kenya ay ka dhacdo doorasho „xor iyo xalaal ah”, loona siman yahay.
“Doorashada keli ah ee Jubilee ay rabaan waa mid ay ayaga ku guuleysanayaan, xittaa haddii ay tahay sharcidaro,” ayuu yiri Raila.
Mucaaradka ayaa dhowaanahan ku celcelinayay in aysan ka qeybgali doonin doorasho, haddii aanan shaqada laga ceyrin afar xubnoo oo ka mid ah IEBC.
“Jubilee iyo dad kale ayaa taageersan in is bedel la’aan la qabto doorasho, waxay doonta ha ahaatee. Balse anaga waxaan dooneynaa in doorasho sax ah la qabto.”
Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo olole siyaasadeed ku jiray shalay ayaa yiri:”dhib kuma qabno doorasho lagu noqdo. Waxaan hubnaa in aan helidoonno codad ka badan kuwii hore.”
Balse, Dr Cabdiwahaab wuxuu qabaa in Kenya ay lugaha la galayso jawi siyaasadeed aad u cakiran oo sababi kara in cadaadis la saaro labada dhiunac.
“Waxaa suuragal ah in labada dhinac lagu qasbo in ay wada fariistaan oo ay wada hadlaan, sababtoo ah amniga iyo midnimada Kenya ayaa halis ku jirto,” ayuu yiri Dr Cabdiwahaab.
“Maxkamadda sare ayaa looga baahan yahay in ay si fiican u sharaxdo dastuurka, ayna kala saarto Raila iyo Uhuru. Hadda, masuuliyadda waxay saarantahay garsoorayaasha maxkamadda ugu sareysa ee Kenya.” Ayuu yiri Dr Cabdiwahaab oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Afrika.
© 2017 shiniilenews.com. All Rights Reserved . Log in	Weboy - Transcript WordPress Theme by Gabfire